1954-1964 5.5 HP Johnson soavalin-dranomasina Tune-UP ny paika | Outboard Boat Motor Repair
1954-1964 5.5 HP Johnson soavalin-dranomasina Tune-UP ny paika
Ny motera ho an'ity tetikasa ity dia Model CD-15 Serial 1698561.
Fifindran: 8.84 cu.in. = 144.8 CCM
Gearcase Taham: 15: 26
Kilalaon'afo plugs: Tompon-daka J6C gapped amin'ny .030 "(Same as Lightwin)
Solika / Oil Mix: 24: 1 87 octane mandatsa-dranomaso ny TC-W3 naoty outboard menaka.
Ambany tarika menaka: 80 / 90W / OMC / BRP HiVis.
Fampitandremana About Pressurized Fuel fiara mifono vy
Ireo motera ireo dia mampiasa fiara mifono vy voatsindry. Raha tokony hitsentsitra solika avy ao anaty tanky, ny fantsom-pifandraisana roa dia manapoka ny rivotra ao anaty tanky, manery azy io ho 4-7 PSI izay manery ny solika hiverina amin'ny motera. Amin'ny ankapobeny, ireo fiara mifono vy voahidy ireo dia ahiana mampidi-doza na loza mitatao. KITIHO ETO mba hianatra bebe kokoa momba ireo fiara mifono vy sy ny fomba niova ho azo antoka kokoa ny vaovao sy solika fiara mifono vy.
Rehefa esoriko ity motera ity dia mikasa ny hanadio izay rehetra azoko atao amin'ny lamba sy mpanadio spray aho. Betsaka ny mpanadio manokana misy an'io fa mampiasa tsotra CLOROX Clean-UP Cleaner miaraka amin'ny Bleach ao an-trano aho, izay hitako tao ambanin'ilay fantsakana. Antenaiko fa haveriko io alohan'ny hahitan'ny vadiko azy tsy hita. Mikasa ny hitazona ireo faritra ireo ihany koa aho rehefa manavaka azy ireo.
TÅke eny amin'ny Motor hita ao
KITIHO ETO ho an'ny antsipirihany.
Alohan'ny hanapahanao hevitra amin'ny fampifanarahana ny môtônanao dia tianao ho azo antoka fa hiverina ny motera ary manana famatrarana miaraka amin'ireo varingarina roa ianao. Raha tsy hivily ny motera amin'ny alàlan'ny famadihana ilay flywheel na toa tsy misy famatrarana azy dia mila mihoatra ny famolavolana tsotra ny moterao. Tsy maintsy manapa-kevitra ianao hoe hatraiza ny fanirianao hanamboatra ny môtô sy ny halaviran'ny fahaizanao mekanika anao. Mora ny manao feo. Ny famotsorana piston sy famerenana amin'ny laoniny ny famatrarana dia bebe kokoa amin'ny ambaratongam-pahasarotana sy mihoatra ny sahan'ity lahatsoratra ity. Tsy te hilaza aho fa ny motera dia tsy azo amboarina na tsy mendrika hamboarina fa amin'ny motera izay ampiasaiko amin'ity lahatsoratra ity dia tsy ilaina izany. Ao amin'ny lahatsoratra iray hafa dia tsy maintsy navotsako ireo piston tamin'ny motera Johnson 15 HP ary nomeko fiainana vaovao izany. Afaka mahazo refy mifehezana ianao any amin'ny fivarotana kojakoja misy anao eo an-toerana sahabo amin'ny $ 20 na $ 30. Ny famatrarana dia tokony hizaha toetra farafaharatsiny 85 na 90 pounds fa mety latsaky ny 100 psi.
Azonao atao ny manolo ny tady fanombohana sy / na ilay mpihazona tady fanombohana. Azo atao koa ny manolo ny lohataona recoil starter raha ilaina. Ireo faritra rehetra ireo dia misy ihany fa tsy nilaina tamin'ity tetikasa ity.
Esory sy hisolo ny lohany gasket.
KITIHO ETO mba hamaky ny miasa eo amin'ny Varingarin'i lohany.
Na oviana na oviana ianao dia manana motera taloha nipetraka kelikely, dia azonao atao ny mieritreritra fa mila serivisy ilay carburetor. Ny gazy, indrindra rehefa afangaro amin'ny diloilo dia hivadika ho verinia na raha tsy izany dia hikororosy ny karburatoranao. Na dia maro aza ireo fitaovana manampy amin'ny fanadiovana carburetor azonao apetraka ao anaty fitoeranao solika na hamafazana mivantana ao anaty carburetor dia tsy hanakaiky ny fanatanterahana ilay zavatra mitovy amin'ny carburetor tune-up izy ireo. Na dia voatahiry tsy misy solika ao anaty carburetor aza ny motera dia mety ho maina sy hitresaka na hiharatsy haingana ireo gasket rehefa manandrana mampiasa azy indray ianao. Ny fomba tokana ahazoana antoka fa hiasa tsara ny carburetor dia ny fanesorana, fanesorana, fanadiovana ary famerenana amina faritra vaovao, fanoloana ary fanaovana fanitsiana izay dingana hanatanterahana ny fanamafisam-peo. KITIHO ETO ho an'ny antsipirihany sary sy ny fomba fiasa noho ny manatanteraka ny carburetor miray feo-ny noho izany maotera.
Afa-tsy ireo plug-pire sy tariby plug-n'ny rehetra dia miorina eo ambanin'ilay flywheel avokoa ny rafi-dorana. Ny karazana magneto ignition izany maotera no Flywheel Magneto amin'ny mpandika Points. Ny asan'ny ignition rafitra dia ny hiteraka ampy Zintin'aratra (Manodidina 20,000 volts) mba hitsambikina ny gap ny kilalaon'afo plugs famoronana sy ny kilalaon'afo ary mampirehitra ny solika / rivotra fifangaroana, ary mba hahazoana antoka fa malefaka Fa raha atolotra ny pitik'afo plug amin'ny marina ny zo fotoana KITIHO ETO ho an'ny antsipirihany sary sy ny fomba fiasa noho ny manatanteraka ny ignition rafitra miray feo-up noho izany maotera.
Impeller sy ny Lower Unit
Hevitra tsara foana ny manolo ny impeller. Ny impeller dia iray amin'ireo ampahany manakiana indrindra amin'ny motera satria tsy nahomby izy io, afaka mandoro ilay motera mora foana ianao, manafoana ny loha, na manana olana lehibe hafa. KITIHO ETO ho an'ny antsipirihany sary sy ny fitsarana azy fanoloana ny impeller paompy rano sy miasa eo amin'ny rafitra ambany.